တင်းကိတ်လှတဲ့ ကိုယ်လုံးအလှလေးတွေ ထင်ဟပ်နေတဲ့အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ချပြလာတဲ့ အိချောပို – Real Link
တင်းကိတ်လှတဲ့ ကိုယ်လုံးအလှလေးတွေ ထင်ဟပ်နေတဲ့အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ချပြလာတဲ့ အိချောပို
ပရိသတ် ကြီးရေ …. ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီ အချိုးအစား လေးကြောင့် ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစားနေ တဲ့ မင်းသမီးလေး အိချောပို ကိုသိကြမယ် ထင်ပါ တယ် နော်..။ သူမ ဟာ အနုပညာ ပျိုးခင်း ကနေ မြေတောင် မြှောက်ပေး လိုက် ပြီး အောင်မြင် ကျော်ကြား လာတဲ့မင်းသမီးများ ထဲ က တစ်ယောက် အပါ အဝင် လည်း ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကားကြီး ပေါင်း များစွာ ကိုလည်း အောင်မြင်စွာ နဲ့ ရိုက်ကူးထား နိုင်တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီး တစ်ယောက် ဆိုလည်း မမှားပါ ဘူး..။
အိချောပို ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစားနဲ့ ပက်သက် ပြီးတော့ လည်း မိန်းကလေး ချင်းပါ အားကျ နေရတဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီလေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ပါ..။ အိချောပို ဟာ လက်ရှိ မှာ လည်း ကြော်ငြာ တွေ အဆက် မပြတ် ရိုက်ကူး နေတာ ဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို လည်း သူမ ရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ ရိုက်ကွင်း ပေါ်က ပုံရိပ်လေး တွေကို မျှဝေပေး လေ့ ရှိသူ ပါ..။
အခု ဆိုရင်လည်း စူစူ ဟာ ရိုက်ကွင်း မစခင် ပြင်ဆင် နေတုန်းလေး မှာ သူမ ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီလေး ပေါ်လွင် နေ တဲ့ လိမ္မော်ရောင်မြန်မာ ဝတ်စုံလေး ဝတ် ကာ မှန်ရှေ့မှာ ရိုက်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို သူမ ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာလေး မှာ တင်ပေး လာခဲ့ ပါ တယ်..။ ကဲ….ပရိသတ် တွေ အတွက် စူစူရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော်…။
Photo credit-​ Ei Chaw Po’s Facebook acc
ပရိသတ္ ႀကီးေရ …. ခပ္မိုက္မိုက္ ေဘာ္ဒီ အခ်ိဳးအစား ေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစားေန တဲ့ မင္းသမီးေလး အိေခ်ာပို ကိုသိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္..။ သူမ ဟာ အႏုပညာ ပ်ိဳးခင္း ကေန ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပး လိုက္ ၿပီး ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကား လာတဲ့မင္းသမီးမ်ား ထဲ က တစ္ေယာက္ အပါ အဝင္ လည္း ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီး ေပါင္း မ်ားစြာ ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ နဲ႔ ရိုက္ကူးထား နိုင္တဲ့ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ မင္းသမီး တစ္ေယာက္ ဆိုလည္း မမွားပါ ဘူး..။
အိေခ်ာပို ဟာ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳး အစားနဲ႔ ပက္သက္ ၿပီးေတာ့ လည္း မိန္းကေလး ခ်င္းပါ အားက် ေနရတဲ့ အမိုက္စား ေဘာ္ဒီေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသူ ပါ..။ အိေခ်ာပို ဟာ လက္ရွိ မွာ လည္း ေၾကာ္ျငာ ေတြ အဆက္ မျပတ္ ရိုက္ကူး ေနတာ ျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏ ဆိုသလို လည္း သူမ ရဲ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ေလး ေတြ နဲ႔ ရိုက္ကြင္း ေပၚက ပုံရိပ္ေလး ေတြကို မၽွေဝေပး ေလ့ ရွိသူ ပါ..။
အခု ဆိုရင္လည္း စူစူ ဟာ ရိုက္ကြင္း မစခင္ ျပင္ဆင္ ေနတုန္းေလး မွာ သူမ ရဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ ေဘာ္ဒီေလး ေပၚလြင္ ေန တဲ့ လိေမၼာ္ေရာင္ျမန္မာ ဝတ္စုံေလး ဝတ္ ကာ မွန္ေရွ႕မွာ ရိုက္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို သူမ ရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာေလး မွာ တင္ေပး လာခဲ့ ပါ တယ္..။ ကဲ….ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ စူစူရဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် တကိုယ်လုံးလှုပ်ခါဆော့ကစားပြလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ TIK TOK လေး
Next post အသည်းယားစရာ ကောင်းတဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ကောက်ကြောင်းလေးတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ